Ọfịs ọrụ ọjọọ: Swiftkey bụ Microsoft SwiftKey Keyboard | Gam akporosis
SwiftKey ghọrọ Microsoft SwiftKey kiiboodu na anyị niile «plof»
Ọ dị mma na onye buru ibu zụtara SwiftKey, mana ugbu a ka ana-akpọ Microsoft SwiftKey Keyboard, bụ njedebe (nke ọma, ọ bụghị nke ukwuu, mana ọ na-enye anyị vibes ọjọọ). Anyị amaworị na Microsoft ga-egbochi mmepe nke ngwa ahụ, mana nyegharịa ya ndị nwe obodo ...
Naanị afọ 4 ka nnweta SwiftKey (ee, oge na-aga ngwa ngwa), Microsoft ekpebiela itinye aha ya Mr. nke mere na onye obula ma onye ngwa ya. Ma eleghị anya, ugbu a bụ oge ịkwaga na keyboard ndị ọzọ, ma enwere haiylos.
Ọ bụ na beta ikpeazụ nke SwiftKey nke ị nwere ike ịhụworị aha ahụ a kpọtụrụ aha nke Microsoft iji mee ka ọ dị ogologo ikwu. Echere m, ị nwalela beta kacha ọhụrụ nke SwiftKey?, Ma ọ bụ nwalela beta kacha ọhụrụ nke Microsoft Swiftkey Keyboard? Ka a pụọ, Ndi zuuru mkpuru obi ya! Kedu ihe na-esote?, Kwuo "kiiboodu Microsoft"?
Bad anyị na-aga dị ka nke a. N'ezie, iji mejuo ìgwè mmadụ ahụ na-agba ọsọ tupu mmelite aha a, ụmụ okorobịa si Microsoft bia na mana gbanwere n'ime emoji ohuru maka ndi oru Android 10 Calmaditos, gịnị ma ọ bụrụ? (Ọfọn, anyị na-ama na-akwadebe otu isiokwu na "4 egbu kiiboodu nke Microsoft SwiftKey kiiboodu mgbe mbụ aha dịruru").
N'ezie, na ịgbaso nke ahụ dị nnọọ nkọ Facebook na-eme ka o doo anya onye bu onye nwere ya karia oké, tinyekwara aha ndị a kpọtụrụ aha na igodo oghere; bia, obere ihe na na mmelite na-esonụ ha na-ezitere gị egbugbu nke decals ndị ahụ n'ihi na ị na-etinye ya na ụbọchị ole na ole ma si otú ahụ gosi gị nke bụ ọkacha mmasị gị keyboard.
Ọ dịghị mkpa imetụ ngwa dị ọcha yana nke ahụ, ọ bụ ezie na anyị maara na ọ nọ na nchedo Microsoft, ihe gbanwere ugbu a. Ya mere anyị anyị hụrụ n'anya oké SwiftKey (eji kemgbe ụdị mbụ ya ọtụtụ afọ gara aga) ka a na - akpọ Microsoft Swiftkey Keyboard ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » SwiftKey ghọrọ Microsoft SwiftKey kiiboodu na anyị niile «plof»
Site n’edemede dị ka nke a, amaghị m ma ọ bụrụ na blọọgụ a nwere ọtụtụ ọdịnihu, m ga-atụba iwe n’ihi na ọ na-ekwu “Microsoft” n’aha ngwa ahụ, ọ bụ ya mere ejirila ngwa ahụ gbue ma gawa n'elu nke ị ga-akwụsị iji ya ... ị nwere ike ịhụ na kwarantaini na-emetụta dị iche na ndị mmadụ
Ihe na-emetụta bụ afọ 10 iji SwiftKey ebe ọ bụ na ewepụtara ya na Market gam akporo. Ọ bụ m keyboard kemgbe. Ma ọ bụrụ na anabatara m nzụta n'aka Microsoft, ihe nwere ike ịbụ ntakịrị bummer bụ na anyị nwere Microsoft na Keyboard na aha ahụ.
Ọ na-efunahụ ụfọdụ njirimara na ihe abụrụla ngwa.
Ekwenyere m n'ihu ọha na ọ bụrụ na anyị aga n'ihu otu a, anyị ga-ahụ ahịa ngwa nke onye ọ bụla ga-etinye aha ha n'ihu ma n'ikpeazụ ha agaghị ahụ akụnụba nke ndị mmepe na ngwa nke bụrụ otu n'ime ụkpụrụ nke gam akporo .
A na-emelite Playlọ Ahịa Google na ihe nzacha ọchụchọ ngwa ọhụrụ